बोर्डका सदस्य नै सेन्सर खारेजको पक्षमा, के होला त खारेज ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । सेन्सरप्रति नेपाली फिल्मकर्मीहरुले लगाउने गरेको आरोप कुनै नौलो कुरा होईन । तर बेला बेलामा सेन्सरसँग सम्बन्धित बहस तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम हुदै आएको छ । समग्र चलचित्र क्षेत्रको बिकासको लागि रहेको सर्बोच्च निकाय चलचित्र बिकास वोर्ड ले नै चलचित्रको विकासको वारेमा भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । यसो त चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुले पनि आफुले चाहे जस्तै वातावरण बनाउन समेत सकेको छैन । नेपालमा बक्स अफिस लागु हुन्छ भन्ने कुरा ‘एका देशको कथा’ मात्रै भएको छ । यस्तो अवस्थामा सेन्सरबोर्ड खारेज हुने कुरा कतिको जायज होला । चलचित्र संघले राजधानीमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि सेन्सर बोर्डको वारेमा बहस गरेको थियो । अन्तत सबैले सेन्सर बोर्ड खारेज हुनु पर्ने माग गरे ।
चलचित्र निर्माताहरुले बक्स अफिस लागु हुनुपर्यो भन्दा चलचित्र संघ र विकास बोर्डले बेवास्ता गरेजस्तै अहिले चलचित्र संघ र चलचित्रकर्मीले सेन्सर बोर्ड खारेज हुनुपर्यो भन्ने माग उस्तै हुने त होईनन्, पछि नै थाहा होला । सहभागी चलचित्रकर्मीले कसैको अभिव्यक्तिमाथि राज्यले कैची चलाउने काम मौलिक अधिकारको हनन हुने समेत बताएका छन् । कसैको कला माथि राज्यले शोषण गर्न खोज्छ भने त्यो अपराध हुने धेरैको तर्क रह्यो । पत्रकार तथा फिल्म साउथ एसियाका प्रमुख कनकमणि दीक्षितले सेन्सर पुरातन प्रक्रिया भएको बताउँदै फिल्मलाई सेन्सरमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सेन्सर बोर्डलाई खारेज गरेर फिल्मलाई ग्रेडिङतर्फ लानु पर्ने तर्क राखे । । समाज खुल्ला भईरहेको छ, हात हातमा विना सेन्सरका अनेकौ सामाग्री दर्शकले हेरिरहेका छन् भने एउटा कलाकारको सिर्जनालाई किन सेन्सर गर्ने –दिक्षितले भनेका छन् । कतिपय चलचित्रकर्मीले अहिलेको जमानामा आफैमा सेन्सर हुनु जरुरी रहेको बताएका छन् । आफ्नो सिर्जनामा कति सम्मको सामाग्री पस्किने आफैले आफैलाई सेन्सर गर्ने हो ताकी राज्यले हैन भनिएको छ । सेन्सर बोर्डका सदस्य प्रकाश सुवेदीले पनि आफू सेन्सरको विरुद्धमा रहेको बताए । उनले सेन्सरले हटाएका सिनसमेत फिल्ममा राखिने गरेको पाइएको, तर त्यसको अनुगमन नहुने भएकाले सेन्सरको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उनले सेन्सर पार्टीका कार्यकता पठाउने थलो भएको समेत तथ्य खोले ।
चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष नकिम उद्धिनले सेन्सर बोर्ड समय सापेक्ष नभएको बताए । ‘सेन्सर बोर्डमा विकास बोर्ड हाबी छ, बोर्डले इजाजत नदिएसम्म सेन्सर हुँदैन । यो कस्तो गाईजात्रा हो ? उनले गुनासो ब्यक्त गरेका थिए । गणतन्त्र आईसकेको देशमा पञ्चायती पाराको सेन्सर सह्य नहुने किम्फका अध्यक्ष वसन्त थापाले बताएका छन् । उनले फिल्म फेस्टिबल गर्दा पनि सेन्सरले दुःख दिने गरेको बताए । निर्देशक नवीन सुब्बाले चर्कै तरिकाले सेन्सरको विरोध गरेका छन् । नेपालमा सञ्चारको सबै माध्यम सेन्सरबाट मुक्त भएका छन् । तर फिल्मलाई सेन्सरको घेरामा राखिएको छ भन्दै विरोध गरे । निर्माता संघका उपाध्यक्ष माधव वाग्लले सेन्सरबाट सबैभन्दा बढि पीडित आफु भएको बताउँदै सेन्सर शब्द नै नकरात्मक रहेको भन्दै सेन्सर खारेज गर्न माग गरे । उनले यदि सेन्सर रहने हो भने देशको अखण्डता र राष्ट्रिय विषयमा मात्र सेन्सर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कतिपय चलचित्रकर्मीले सेन्सरबोर्डको काम फिल्म हेरेर सर्टिफिकेट दिनुपर्ने ठाउँमा कैची लगाउने गरेको बताए । सबैले सेन्सर खारेजको माग गरेका छन् ।
के होला त सेन्सर बोर्ड खारेज ?
चलचित्रकर्मीहरुको चर्को विरोध हिजोका दिनमा पनि हुदै आएका थिए । आज पनि जारी छ । तर यो विरोध र बहसले सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ की राख्दैन भने कुरा हो । राज्य प्रति विरोध र बहस भईरहन्छ तर ती सबै माग पुरा हुदैनन् । नत्र डा. गोबिन्द केसी पनि पटक पटक अनशन बसिरहनु पर्दैनथ्यो होला । राज्यको राजनितक संरचना मध्यको एउटा निकाय हो सेन्सर बोर्ड । मन्त्रालय मातहतको विभागीय स्वरुपको दाँचामा बसेर सञ्चालित यस्ता निकायहरु बिलीन हुन त्यति सजिलो छैन । सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नको लागि सरकार आफै तम्सिनु पर्छ । जुन संभव छैन ।
तर सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न सरकार तम्सिनु पर्ने खासै त्यस्तो कारण छैन । न त फिल्म क्षेत्रबाट राज्यलाई ठूलो राशिमा करशुल्क गएको छ । न त नेपालका कलाकर्मीले राज्यलाई कर नै तिर्ने गरेको छ । त्यस कारण पनि सरकार फिल्म क्षेत्रप्रति उदासिन छ । सेन्सर बोर्ड सँगै सरकारमा अन्य धेरै बोर्डहरुको कुरा उठ्न सक्छ । यसरी सबै बोर्ड खारेज गर्न राजनितीक संरचना र सरकारको संरचना नै फेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो संभव देखिदैन । नेपालका राजनितीक भागवण्डाको आधारमा सञ्चालित धेरै बोर्डहरु, विभागहरु, प्रतिष्ठानहरु, संस्थानहरु रहेका छन् । यी सबैमा विवाद छन् । त्यसैले फिल्म क्षेत्रको यो समस्यालाई राज्यले सहजै समाधान गर्न गार्हो हुन्छ । तर चलचित्रसँग सम्बन्धित निकायले चर्को विरोध र आन्दोलन जारि राखेर फिल्म निर्माणमा केही समय स्थगन गरि सेन्सर नजाने हो भने पक्कै सरकारले विकल्प खोज्न सक्थ्यो की ?